Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma внатре siif godhe kanaf Кан Интеракцијата Irra eegamuu Watermaal Jetta?
МИЕ ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo isa isa sirritti на hinaafaa ta'u каде ITTI yaadii.
SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu Fi isa waaqesuu илјади dhiima layyo akka ин tahin пеколот qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24СПИ waliin ааа dubbisinu.
14 "'Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.
(На. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Аmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (на. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (на. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (на. 22)?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (на. 23 биде 24) mee xinxalii. Maal irra barata?
НО BOODA GCPs
Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 биде 34:14 mee qoradhuu.
Nuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Коментари
Tamirat Teshome Dekebo на June 25, 2017 на 10:57 am рече:
Ararso Korsa на април 11, 2017 на 4:57 часот рече:
Misganu Gadisa на Март 23, 2015 на 10:00 am рече: